शिक्षक नियुक्तिमा धाँधली र मनोपोली भयो? यो फारममा सबै विवरण दिनुहोस्, यो फारम-मा तपाईँको गोपनियताको ग्यारेन्टी छ - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारशिक्षक नियुक्तिमा धाँधली र मनोपोली भयो? यो फारममा सबै विवरण दिनुहोस्, यो फारम-मा तपाईँको गोपनियताको ग्यारेन्टी छ
May 19, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार 1
शिक्षक नियुक्तिमा धेरै धाँधली र मनोपोली रहेको विस्तारै खुल्दैछ। खबरम्यागजिनले घेरै ठाउँमा चलिरहेको धाँधली र मनोपोलीबारे जानकारीहरू पाइरहेको छ। खबरम्यागजिन र अङ्ग्रेजी पोर्टल दार्जीलिङ क्रोनिकल्स दुवैले यस्ता धाँधली र मनोपोली सार्वजनिक गर्ने निधो गरेको छ।
धेरैलाई सूचना र जानकारी दिन ‘गोप्यता’ नहुने हो कि भन्ने भयको कारण असुविधा भइरहेको थाहा पाएका छौं। यहाँ सबैको गोप्यताको लागि एउटा फारम क्रियेट गरिएको छ। दार्जीलिङ क्रोनिकल्सले तपाईँहरूको ‘गोप्यता’-को ग्यारेन्टी होस् भनेर यो फारम बनाएको हो।
यो फारम भर्दा तपाईँको गोपनियताको ग्यारेन्टी रहनेछ।
यहाँ तपाईँहरूले तपाईँहरूको स्कूलहरूमा भइरहेको मनोपोली र धाँधलीको डिटेल्स हाल्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा डोकुमेन्ट पनि होस् र ‘जेन्युन’-हरूलाई अन्याय नहोस् र धेरैवर्षदेखि पढाइरहेका र सबै क्राइटेरिया पूरा गर्नेहरू र भेरिफिकेशनमा गएर पनि सूचीमा नपरेकाहरूलाई अन्याय नहोस् भनेर हामीले यो पहल गरेका छौं।
सबै यो अभियानमा जोडिनहुन हार्दिक अपील गर्दछौं। फारम-क्लिक गरेर जानकारी संलग्न गराउनुहोला-खबरम्यागजिन
यहाँ तल बीपी बजगाईँद्वारा सार्वजनिक गरिएको नियुक्ति सूची राखेका छौं
उच्च विद्यालयको नियुक्ति सूची
प्राइमेरी नियुक्ति सूची
दार्जीलिङ विधानसभाको उपचुनाउ भोली :16 कम्पनी केन्द्रिय सुरक्षाबल तैनाथ: भारत-नेपाल सिमामा नाका सिल